ISpain iphelelwa ngamanzi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kulo nyaka sibona omunye wemiphumela emibi kakhulu yokuguquka kwesimo sezulu: isomiso. Akusekho nje ukuthi izinga lokushisa elijwayelekile liyanda, into ebeka amahlathi ethu engcupheni, kepha ukuthi alina njengoba kufanele. Amadamu aphela amanzi, futhi uma isimo singathuthuki ngokushesha singasikeka ekuthengeni kwakho.
Isomiso esihluphekayo, ikakhulukazi enyakatho yenhlonhlo, Kuyinto embi kunazo zonke esezike zahlala ezweni iminyaka engaphezu kwengu-25.
1 Sinjani isimo samachibi?
2 Imiphumela yesomiso
Sinjani isimo samachibi?
Amadamu angaphansi kwama-50%. Njengamanje, siphila ezweni elomile. E-Duero Basin, bangaphansi kuka-30%, ngenkathi ngonyaka odlule ngalesi sikhathi babecishe babe ngama-60%. Umgodi waseGuadalquivir uku-40%, iJúcar ingama-30% kuthi iSegura ibe ngu-18%.
Izindishi zeMiño neSil, ezazike zagcwala kahle, sezisesimweni esiphuthumayo: imvula kuleyo ndawo yehle phakathi kuka-25 no-30% ngokwesilinganiso eminyakeni engama-40 edlule.
Imvula ephansi kanye nokwenyuka kwezinga lokushisa, kanye nokwanda kwesibalo sabantu (ikakhulukazi ezokuvakasha) yikhona kanye okuyimbangela yalokhu kwehla kwamanzi avela emadamini. Kepha, ngandlela thile, lokhu bekuyinto ebingabikezelwa. Sasinayo eyodwa intwasahlobo eshisayo kakhulu, ihlobo nalo liyashisa futhi lomile osekucishe kwaqala cishe ekuqaleni kuka-Okthoba ezindaweni eziningi njengesifunda saseMedithera.
Izimvula zibonakala zingafuni ukuza, okuyi kuphoqe amadolobha angama-60 eCastilla y León ukuthi afakele uketshezi oluyigugu ngamaloli athwala amaloli, futhi cishe angama-30 eGuadalajara naseCuenca. Ngaphezu kwalokho, kunezindawo eziseLa Rioja, eSierra Sur de Sevilla, e-Axarquía yaseMalaga, enyakatho-ntshonalanga yeLeón, maphakathi ne-Ourense nasemadolobheni amaningi ase-Extremadura angathinteka ekunqanyulweni kukagesi. Kepha le akuyona kuphela imiphumela.
Lapho lina kakhulu futhi amaxhaphozi egcwele, izitshalo zokuphehla ugesi ngamanzi zivula amasango ezikhukhula ukukhiqiza amandla. Lokhu kubangela ukuthi amanani entengo ehle; esikhundleni salokho Uma amanzi entula, izinkampani zinquma ukuthi zizowakhiqiza nini amandla, okunyusa isikweletu sikagesi.
Kwezolimo nemfuyo isomiso siyinkinga enkulu kakhulu. Ngaphandle kwamanzi, izitshalo azikwazi ukukhula noma izilwane azikwazi ukuphila.
Kusala nje ukulinda imvula. Mhlawumbe ngokuzayo ukuhlwanyela amafu emvula kungayixazulula inkinga.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isomiso » ISpain iphelelwa ngamanzi
Ezweni lakithi, e-Ecuador, futhi ikakhulukazi esifundazweni sami saseManabi, sibhekene nokulungiswa kwezinkathi ezithile zonyaka, ezinomthelela ngaphezu kwakho konke esikhathini sezinkathi nobukhulu bezimvula, ngoba zimfushane kakhulu futhi zinamandla amancane. Lokhu kuziphatha kuthinta isifunda sethu, ikakhulukazi emkhakheni wezolimo, nasekuphakelweni kwamanzi okusetshenziswa emadolobheni.